ယောက်ကျားလေးများ အတွက်( သီးသန့်) ဗေဒင် ~ ITmanHOME
05:33 အပတ်စဉ် ဗေဒင်9comments
ယောက်ကျားလေးများ အတွက်( သီးသန့်) ဗေဒင်
ယောက်ကျားလေးများအတွက် ( သီးသန့်) ဗေဒင်
.....လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးးD ။ ပြောချင်လွန်းလို့လာပြောတာနော်..သိပြီးသားသူတွေလည်းသည်းခံဖတ်ပေး
တိုင်တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်...ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တော့ မှန်တယ် ဆရာရေ....ဆရာ စံဇာမဏီဘို ရဲ့ဘယ်လို
မယ်ဗျာ...ကိုယ့်ရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်(အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်)က 1979ခုနှစ်ဆိုပါတော့..အဲဒီထဲကနေ 638ကိုနှတ်လိုက်ပါ..
( 1979 - 638 = ၁၃၄၁ ) ၁၃၄၁ ရပါမယ်... အဲဒါကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ဘဲပေါ့... အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကိုတည်
လောက်သေချာရှင်းပြမထားဘူးးD...။ ကဲမြန်မာသက္ကရာဇ်ပြောင်းတာသိပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်လိုက်ရအောင်...
(1979 - 638 =၁၃၄၁ခုနှစ်) ၁၃၄၁ ခုနှစ်ရပါတယ်... အဲဒါကို ၄ နဲ့ထပ်မြှောက်ပါ...။
(၁၃၄၁ x ၄ = ၅၃၆၄ ) ၅၃၆၄ ရပါတယ်.... အဲဒါလေးကို ၇ နဲ့စားလိုက်ပြီး အကြွင်းကိုရှာပါ....။
၅၃၆၄ ကို ၇ နဲ့စားတော့အကြွင်း ၂ ရပါတယ်ခင်ဗျာ...(မှတ်ချက်-calculatorနဲ့မတွက်နဲ့ဗျာ(.)ဒဿတွေထွက်
လို့ကျွန်တော်တော့စာရွက်ပေါ်မှာချတွက်တယ်...တကယ်လို့ calculator နဲ့တွက်ချင်လည်းရတယ် ၅၃၆၄ ကို
၇ နဲ့စားရင် 766.2857142ရမယ်ဗျာ...အဲဒီလိုရရင် (.)ဒဿမရှေ့ 766ကိုယူလိုက်ပါ...ပြီးရင် ၇ နဲ့ပြန်မြှောက်
(766 x ၇ = 5362 )ရပါတယ်...အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်ကိုတွက်ထားလို့ရတဲ့အဖြေက ၅၃၆၄ နော်...
ကဲနှတ်ကြည့်ရင် ၂ ကြွင်းတယ်နော်...ရှင်းအောင်ရှင်းပြလိုက်တာပိုရှုတ်သွားပြီးးD... အဲလိုချင်တာတော့အကြွင်း
ဗျာ....အကြွင်းရရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့အဖြေကိုကြည့်လိုက်ပါ...ကျွန်တော်က ၁ ကြွင်းသဗျို့မှန်လိုက်သမှ
ဟက်တက်ကိုကွဲနေတာဘဲ :D...သတိရလို့တခုထပ်ပြောချင်ပါတယ်...၇၊ ၈၊ ၉ ကြွင်းတယ်ဆိုပြီးအောက်မှာပေး
ထားတဲ့အဖြေက ၀ ကနေ ၆ အထိသာပေးထာတာဆိုတော့ ၇၊ ၈၊ ၉ ကြွင်းသမားတွေလာပြီးမေးကြလို့ပြန်ပြီး
ရှင်းပြရတာမောဖူး ပါတယ်...အခုတော့အဖြေတခါတည်းပေးခဲ့မယ်... ၇ ကြွင်းတဲ့သူက ၇နဲ့ပြန်စားတော့ ၀
ကြွင်းပါတယ်... ၈ ကြွင်းတဲ့သူကတော့ ၇ နဲ့ပြန်စားရင် ၁ ကြွင်းပါတယ်ခင်ဗျ.. ၉ ကြွင်းတဲ့သူကတော့ ၇နဲ့ပြန်
စားရင် ၂ ကြွင်းပါတယ်ခင်ဗျာ... ကဲကိုယ်ရတဲ့အကြွင်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ....
အကြွင်း(1)။ ရခဲ့ရင်တော့လက်မ ထောင်လိုက်ပါ။ ဖိုးကံကောင်းလေးပေါ့။ ကိုယ်ရမဲ့မိန်းကလေးကအပြစ်ကင်း
သူလေးပါ။ ကိုယ့်ကျင့် သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူပါ။ အေးတဲ့ နေရာမှာတော့ ရေခဲက ဆရာခေါ်ရအောင်ပါပဲ။ ရီး
စားတောင် ထားရကောင်းမှန်းမသိတဲ့သူပါ။ အလုပ်တဖက် ပညာတစ်ဖက်နဲ့ ဘ၀သမားလေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်အ
စွမ်း အစနဲ့ နေနိုင်တဲ့သူ၊ ဥာဏ်ထက်မြက်တဲ့သူလေးပါ။ တစ်ခါတစ်လေ နွဲ့ဆိုး ဆိုးတက်ပေမဲ့ တည်တည်
ကြည်ကြည်နဲ့ နေထိုင်တက်သူဖြစ်မယ်။ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ မိန်းမဆန်တယ်။ ခေတ်မီပေမဲ့ ခေတ် မဆန်
ဘူး။ သ၀န်လေးတော့ ကြောင်တက်တယ်။ သူ့ရှေ့မှာ မိန်းကလေးအကြောင်းတော့ ယောင်လို့တောင် မပြော
မိစေနဲ့ ချော့ရတာ မောသွားမယ်။ သူများတွေနဲ့ကျရင် လူကြီးဆန်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်ကျတော့ ကလေးဆန်
လွန်းတော့ မိဘတွေတော့ အမြင်မကြည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မှာတော့ သစ္စာရှိတဲ့သူလေးပါနော်။
အကြွင်း(2) ။ ရခဲ့ရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းလို့သာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်ပါတော့။ ကိုယ့်ကတော့ အချစ်
သူရဲကောင်းကြီးပါ။ မေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ ခွင့်လွတ်ကြင်နာတက်တဲ့သူပေါ့။ ကိုယ်နဲ့တွေ့မဲ့ မိန်းကလေးက
အခြားသူကြောင့် အသဲကွဲဝေဒနာခံစားနေရသူလေးပါ။ သူ့အကြောင်းကို မခြွင်းမချန် ရင်ဖွင့်လာမဲ့သူပေါ့။ ကိုယ်
က ကရုနာအပြည့်နဲ့ စီးကြိုမဲ့သူပါ။ သူကလည်း အတိတ်ကလူဆီကို စိတ်မညွတ်ပဲ သစ္စာရှိမဲ့ မိန်းကလေးပါ။ အ
လွန်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်တာဝန် ကျေပွန်တဲ့အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ပါ။
အချောအလှလေးကလည်း ဖြစ်ဦးမှာ ။ရုပ်ဆင်းရူပါကတော့ လူတကာ ငေးရလောက်တဲ့သူနော်။ အိမ်ထောင်
ထိန်းတော်ပြီး ကိုယ့်မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေလို့ နောက်ဆို ကိုယ်ကသမက်လို့တောင် အထင်ခံ
အကြွင်း(3) ။ ရခဲ့ရင်တော့ တော်တော်ကြီးမဲ့သူပဲ…:D တမျိုးမတွေးနဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးထဲကဖြစ်ဖြစ်၊ မြင့်မြတ်သော
အမျိုးအနွယ် ကဖြစ်ဖြစ် ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျမှာ။ ဂုဏ်ပကာသန ၀န်းကျင်အလည် ကပေါ့
။ တော်တော်မာနကြီးမှာ။ စိတ်ကြီး ခေါင်းမာ ပညာတတ် နှလုံးသားချိုသောလည်း ဘုဂွပြောတတ်ပြီး တော် ရုံ
တန်ရုံကိုအဖက်မလုပ်တက်တဲ့သူမျိုး၊ ပညာတက်ပြီးကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ရပ်တည်နိုင်တဲ့သူ၊ တခုတော့ပြော
မယ် ကိုယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးလည်း ကိုယ့်အသိုင်းဝိုင်းထဲ ၀င်လာမဲ့သူမျိုး မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ကပဲ သူ့အသိုင်း
၀ိုင်းထဲဝင်ရလိမ့်မယ်။ အနိုင်လိုတာ မဟုတ်ပေမယ့် အနိုင်ကျင့်တဲ့ ၀ါသနာတော့ရှိတယ်။ သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး
အပေါင်းအသင်း ငယ်မိတ်ဆွေတွေထဲမှ ခပ်ညံ့ညံ့လာလည်ရင်တော် ရန်ဖြစ်မှာ။ ။ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကံကောင်း
ပါတယ်လေ။ အိမ်ထောင်ကြောင့်ဘ၀မှာ ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မူတွေရရှိမှာ။ သူ့ကြောင့်ပဲ တိုးတက်မှုတွေရ လာ
လိမ့်မယ်။ သူကလဲကိုယ့်ကို တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလေး အလုပ်လုပ်ခိုင်းမှာ။ ကွယ်ရာမှ သူငယ်ချင်းတွေ မိန်း
မကြောက်လို့ ပြောရင်တော့ ခံပေတော့ ။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင် တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နောက်မှာ
ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမရှိတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
အကြွင်း(4) ။ ရခဲ့ရင်တော့ တော်ဝင်သူလေးပါ။ အသိုင်းဝိုင်းကြီးထဲကနေ အချစ်တွက်အရာရာကို စွန့်လွတ်ပြီး
ကိုယ့်ဘ၀ထဲ ရောက်လာမဲ့သူလေးပါ။ လေးစားလောက်စရာ လူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘ၀အတွေ့အကြုံနည်းပြီး
ဘ၀ကိုအေးအေးချမ်းချမ်း၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ သဇင်ပန်းလိုမိန်းမသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျလို့
သူငယ်ချင်းများက မုဒိတာပွားကြပါလိမ့်မယ်။ အလွန်သီးခံတက်၊ ခွင့်လွတ်တက်ပေမဲ့ မဟုတ်တာလုပ်
ရင်တော့ တော်တော်ကိုပွဲကြမ်းမဲ့သူ မာနခဲမလေးပါ။ မိဘတွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အပေးကမ်းလည်း
ရက်ရောတယ်။ အရာရာကိုယ့်သဘောပါ။ အဲ နောက်တယောက်တော့ စိတ်နဲ့တောင် ရှုတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ ကွာ
ရှင်းစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီးသားပဲနော်။ သဘောထားကြိးပေမဲ့ ဒါမျိုးတော့ ခွင့်မလွတ်တက်ဘူး၊ အပြင်အလုပ်
ထွက်လုပ်ရင်တောင် အိမ်ထောင်မှု မလစ်ဟင်းစေရတဲ့သူမျိုးပါ။ မိန်းမရကံကောင်းပါတယ်။
အကြွင်း(5) ။ ရခဲ့ရင်တော့ ဆိုရှယ်မမပဲ၊ ခေတ်ထက်ကို ရှေးကပြေးနေတဲ့ သူလေ၊ေ ဟာ့ရှော့လို့ပြောရမလား၊
အလန်းဇယားလို့ပြောရမလား (ရုပ်ရှင်ကြေငြာဝင်တာမဟုတ်ပါ) အတော်ကို စတိုင်မိတဲ့ မလိုင်ခဲမမနော်။ ပြင်
ဆင်ထားပုံများကတော့ မားကတ်မှာ အလှပြထားတဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်နဲ့နင်လားငါလား၊ ရီးစားများတာလား လာ
မပြောနဲ့ ရှင့်တောင်သနားလို့ ယူထားတာနော်။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးပြိး ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ နေချင်တဲ့သူ၊
သွားများ မပြောမိစေနဲ့ ကိုယ့်ကို ပြန်တရား ဟောသွားလိမ့်မယ်။ သူ့ကျေးဇူးနဲ့ နိုင်ငံခြားလည်း ရောက်ဦးမယ်။
ပညာတော်သင်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတင်းလွတ်လိုက်တာ၊ ပစ္စည်းဆိုလည်း အကောင်းစားမှ သုံး
တာ၊ အစားအသောက်ဆိုလည်း ထမင်းချက် ကောင်းကောင်းခန့်ပေးထားရမယ်။ သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး သူ့ပုံစံ
အတိုင်း ကိုယ်ပါမျောပါသွားလို့ သူငယ်ချင်းတွေ လမ်းတွေတောင် မမှတ်မိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အကြွင်း(6) ။ ရခဲ့ရင်တော့ မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူပါ။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိတဲ့ သူငယ်
ချင်းလို မိတ်ဆွေလိုကနေ အဆင့်တက်သွားမှာပါ။ သူနဲ့ အိမ်ထောင်မကျခင် ကိုယ့်မှာ ရီးစားရှိခဲ့တာလည်း သူ
ကသိနှင့်ပြီးသားပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ သံယောဇဉ်တွယ်ပြိး ချစ်သွားကြမှာ၊ အိမ်ထောင်ကျပြီး သူ့မေတ္တာရိပ်အောက်
မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမှာပါ။ ဆိုးတိုင်ပင် ကောင်းတိုင်ပင် နှစ်ယောက်သား အတူသွားအတူလာ ဖြစ် လိမ့်
မယ်။သဘောထားကြီးပြီး အရမ်းချစ်တက်တဲ့ မိန်းကလေးပါ။ နားလည်မှုရှိပြီးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေ
မဲ့သူပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ကိုယ့်အလုပ်တွေကို ၀ိုင်းကူပြီး ကြီးပွားရေး စီးပွားရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အတွက် အရာအားလုံး သူ့လက်သူ့ခြေနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရမှ ကျေနပ်တဲ့သူမျိုးပါ။ သင့်ကို သူငယ်
အကြွင်း(0) ။ ရခဲ့ရင်တော့ တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ထက် တစ်
ခုခုကြီးတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျလိမ့်မယ်။ အသက်တို့ ပညာတို့ ဂုဏ်တို့ ကိုပြောတာနော်…:D။
ဘာသာမတူတာမျိုးလည်း ဖြစ်တက်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မှာ အလိုလိုက်လိမ့်မယ်။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စိတ်မ
ချဖြစ်တက်တယ်။ သူများ ပစ်သွားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လေးနဲ့ အလှတော့ အတော်ပြင်မဲ့သူပဲ၊ ကိုယ့်အပေါ်မှာ
မိခင်မေတ္တာမျိုးနဲ့ ချစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဆိုးသမျှ အနွံအတာခံပြီး သူစိတ်အလိုမကျရင်တော့ မျက်ရည်လေး က
လယ်ကလယ်နဲ့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရမဲ့ အခက်အခက်တွေကို လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ ရင်ဆိုင်ပေးမဲ့
သူမျိုးပါ။ ခေတ်ပညာတက်ပြီး အစွမ်းအစရှိတဲ့သူ၊ ဆရာလုပ် အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့သူပါ။
ကဲကိုကို၊ မောင်မောင် တို့ရေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုလိုတွက်
ကြည့်ရင်း စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဖဲရိုက်ကြပေါ့ဗျာ နော့.......းD
credit yar zar htwe
22 September 2013 at 06:55 Reply
အား ဟာ စိတ်ပျက်သွားပြီ အကြွင် ၅ ဗျာ ကျနော်က အေးဆေးတဲ့ သူမှကြိုက်တာ
22 September 2013 at 06:56 Reply
Moe Sat Lay says:
22 May 2014 at 03:27 Reply
အီး ၃ ကြွင်းတယ်ဂျ
3 June 2014 at 01:45 Reply
1 July 2014 at 19:25 Reply
win Zaw says:
14 July 2014 at 16:33 Reply
aung myolin says:
7 August 2015 at 03:53 Reply